I-Archipelago Cottage ene-180° Seaview! - I-Airbnb
I-Archipelago Cottage ene-180° Seaview!
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguHanna
I-cottage eneembono ezimangalisayo zepanoramic phezu kweziqithi zaseStockholm. Imizuzu engama-30 ukusuka eStockholm ngemoto okanye ngebhasi. Qubha elwandle, i-BBQ okanye ukutshisa ilanga kumgangatho omkhulu welanga.
I-cottage inamagumbi ama-2 kunye negumbi lokuhlambela elijikelezwe yi-sun deck enkulu kunye ne-180 degrees elwandle. Igumbi lokulala elahlukileyo linebhedi ephindwe kabini kunye nesango lokungena labucala. Elinye igumbi lineebhedi ezimbini zomntu omnye, isofa kunye nekhitshi.
I-sauna yokutshisa iinkuni ingasetyenziselwa umrhumo omncinci ngokuvumelana nomnini.
4.57 · Izimvo eziyi-23
Indawo ye-cottage yindawo efanelekileyo yokuqala yokufumanisa i-archipelago kunye nohambo oluya eStockholm. Kuthatha malunga nemizuzu engama-30 ngemoto okanye ngebhasi ukuya kwisixeko saseStockholm. Kungenjalo unokukhwela ibhasi eya eGustavsberg kunye/okanye eStockholm. Isikhululo sebhasi simalunga ne-13 imizuzu yokuhamba ukusuka kwindlwana.
Le ndlu ikumasipala waseVärmdö, obandakanya iziqithi ezidumileyo ezinjengeSandhamn, Grinda, Svartsö, Nämdö, Runmarö kunye neMöja. Ukuba uceba uhambo oluya nakwesiphi na iziqithi ezikwichwebakazi kukho izikhephe ezivela eVaxholm/Stavsnas. Kona kulula ukuya kwezi ndawo, kuthatha malunga ne-30/40 min ukusuka kwindlwana. Ummandla unika amathuba atyebileyo okuhlola indalo kunye nokutyelela iminyhadala yenkcubeko.
I-cottage kunye nemihlaba ayilungiselelwanga abantu abakhubazekileyo. I-cottage emi phezu kwenduli ngoko ingumnqantsa kwicala elinye ngoko ke isenokungamlungeli umntwana wakho ngokuxhomekeke kwiminyaka yobudala.
Elumelwaneni kukho indawo encinci yeenqanawa ekufuneka udlule kuyo ukuze ufike kwi-cottage.
Andifumaneki kulo mhlaba kodwa umama uhlala kwamakhelwane kwaye uya kukwazi ukunika uncedo xa lufuneka.